आफ्नी सुन्दरी छोरीसँग विवाह गर्नेलाई दुई करोड उपहार दिने बाबुको यस्ताे अनाैठाे घोषणा! – Namaste Host
April 3, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on आफ्नी सुन्दरी छोरीसँग विवाह गर्नेलाई दुई करोड उपहार दिने बाबुको यस्ताे अनाैठाे घोषणा!
आफ्नी सुन्दरी छोरीसँग विवाह गर्नेलाई दुई करोड उपहार दिने बाबुको यस्ताे अनाैठाे घोषणा! थाइल्याण्ड`का एक करोडपति`ले आफ्नी कुमारी छोरी`सँग विवाह गर्ने केटा`लाई दुई करोड भन्दा`बढी रकम दिने घोषणा गरेका छन् ।।
थाइल्याण्ड`को दक्षिणी प्रान्त चुन्फोन प्रदेश´का करोड`पति अर्नोन राेडथोंग`ले छोरी कार्नसिता`सँग विवहा गर्नेलाई उक्त रकम दिने घोषणा गरे`का हुन् । कार्नसिता २६ वर्षकी छन् । उन`ले ब्याच्लर पढेकी छन् भने चिनियाँ र अंग्रेजी भाषा बोल्न सक्छिन् । ५८ वर्षका अर्नोन फलहरू`को फार्मका मालिक हुन् ।।
उनले आफ्नी छोरी`सँग विवहा गर्ने केटामा तीन योग्यता हुनु पर्ने बताएका छन् । केटा स्मार्ट हुन जरुरी छै`न त`र पढ्न लेख्न जानेको हुनुपर्छ । अल्छी हुुनु हुँदैन परिश्रमि हुन जरुरी छ । पैसाका बारेमा कन्जुस र फलहरूलाई माया गर्ने हुन जरुरी छ । उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नी छोरी कुमारी रहेको र पारिवारिक व्यापारमा सहयोग गर्ने गरे`को उल्लेख गरेका छन् ।।
विवाहका लागि राष्ट्रियता`को सीमा जरुरी नभएको उन`ले बताएका छन् । छोराहरू भएपनि विवाहपछि सबै सम्पत्ति ज्वाँइलाई दिने उनले बताएका छन् । साथै व्यापार पनि सम्हालनु पर्ने छ । मिररको रिर्पोट अनुसार उनी छोरी`को विवाह नभएका कारण तनाबमा छन् र यस्तो फैसला गरेका हुन् ।।
याे पनि, आर्य`घाट`को छाना भत्किँदा म-लामी गएका १८ जनाको मृ`त्यु, हझै उद्धार गरिदैँ । भारतको राजधानी दिल्लीस्थित एक आर्य`घाट`को छाना भत्किँदा १८ जनाको मृ- त्यु भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ । मलामी गएकाहरुको नि` धन भएको हो । आइतबार गाजियाबादमा रहेको आर्यघाटको छाना भत्किएको हो ।।
हालसम्म १८ को मृ- त्युको खबर प्राप्त भएको र त्यहाँ फसेकाहरुलाई उद्धार गर्ने कार्य चलिरहेको बताइएको छ । यी मानिसहरु आफन्तको अन्तिम सं`स्का`रमा भाग लिन आएको प्रहरीको भनाइ रहेकाे छ । झरीबाट बच्न यिनीहरु छानामुनी ओत लागेका थिए । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले यस घटना दुखद भएको बताउँदै घटनामा मृ- त्यु भएकाहरुको परिवारलाई दुई–दुई लाख आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने बताएका छन् ।।
अहिलेसम्म ३८ व्यक्तिलाई खण्डहरवाट बाहिर निकालिएको छ । अझै केही ब्यक्ति खण्डहरमा भएकाले उद्धार कार्य भइरहेको छ । यो दु`र्घट`ना गाजियाबाद पुलिस स्टेशनको मुरादनगर क्षेत्रमा भएको जनाईएकाे छ ।।
वातावरण मा सुधार नआएकाले थप ७ दिन विद्यालय बन्द !